Irrawaddy:ဇီးကုန်းတွင် ဆူပူဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်နေ | San Oo Aung's Weblog
Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done	ISLAM ARTICLES	Rambo, "Live for nothing. Die for something."	Doa - Ahmed Saud with English translation Gibraltar or Jebel Tariq or Tariq’s mountain (Moroccan Berber general, Tariq ibn Ziyad)	Top 50 Myanmar/Burmese Blogs	List of Mosques in Mandalay (in Burmese)	Martin Luther King: One who breaks an unjust law must do so openly, lovingly, and withawillingness to accept the penalty	Aung San Suu Kyi: the unseen photo album IMPORTANCE OF THE TOILET HYGENE AND DANGERS OF SHIT	Pilot cabin
Irrawaddy:ဇီးကုန်းတွင် ဆူပူဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်နေ
Posted on March 27, 2013 by tunaung	ပဲခူးတိုင်း ဇီးကုန်းမြို့ရှိ ဗလီတလုံးနှင့် မွတ်စလင်များ၏ နေအိမ်နှင့် ဈေးဆိုင် ၂၀ ခန့်ကို ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခွဲခန့်တွင် လူ ၅၀၀ ခန့်က ထပ်မံ ဖျက်ဆီးကြကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဗလီကို ယမန့်နေညက ဖျက်ဆီးသေးသော်လည်း မပြိုပျက်သေးသဖြင့် ထပ်မံ ဖျက်ဆီးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သတင်းသမားများ ဓာတ်ပုံရိုက် သတင်းယူမှုများကို တားမြစ်ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရှိသော်လည်း အခြေအနေကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ယခုအခါ အင်းမ အခြေစိုက် တပ်မ (၆၆) တပ်ဖွဲ့တချို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာ အနီးရှိ ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်များအရ သိရသည်။
Filed under: Burma « မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း ကြို့ပင်ကောက်တွင် အကြမ်းဖက် ဖျက်စီးမှု ဖြစ်ပြီးနောက် တွေ့မြင်ရသည့်မြင်ကွင်း Leadership failure in the latest wave of religious violence in Burma »